Filipiana 4 - Ny Baiboly
4Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo; eny, averiko indray: mifalia e! 5Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny hamoram-panahinareo: efa akaiky anie ny Tompo e! 6Aza manahy na inona na inona; fa ambarao an'Andriamanitra, amin'ny fivavahana amam-pifonana ary fisaorana, izay rehetra ilainareo na amin'inona na amin'inona. 7Hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesoa anie ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra.
8Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona rariny, na inona na inona madio, na inona na inona mahatehotia, na inona tsara laza, rahefa mety ho hatsaram-panahy, sy rahefa mety ho misy dera koa, dia aoka hoheverinareo izany. 9Araho avokoa izay efa nianaranareo, sy noraisinareo ary renareo sy hitanareo tamiko, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana.
10Nahazo hafaliana lehibe ao amin'ny Tompo aho, fa indro hitako mamony indray izao ny fitsinjovanareo ahy; tao aminareo mandrakariva izany, saingy ny zavatra hohararaotinareo no tsy mbola nisy. 11Tsy dia filan-javatra anefa no ilazako izany, fa efa nianatra ny ho afa-po amin'izay ananako aho, 12ka haiko ny mihafy, haiko ny manam-be. Efa nianatra ny ho voky sy ny ho noana aho, ary ny hanam-be sy ny tsy hanana na inona na inona, na aiza na aiza, ary na amin'inona na amin'inona. 13Mahefa ny zavatra rehetra aho, amin' ilay mankahery ahy; 14nefa tsara ny nataonareo niombom-pahoriana tamiko.
15Ary fantatrareo koa, ry Filipiana, fa tamin'ny niandohan'ny Evanjely, rahefa niala tany Masedonia aho, dia tsy nisy Eglizy nifanao kaontin'ny miditra sy mivoaka tamiko, afa-tsy hianareo ihany. 16Fony aho tany Tesalonìka aza, dia nampanateranareo fanampiana indray mandeha aloha, dia nisy fanindroany koa. 17Tsy mitady ny homena indray aho, fa ny vokatra miavosa soratana ho anareo no tadiaviko. 18Efa miadana aho izao, ary manana ny ampy sy feno mihitsy, nahazo ny zavatra nampanaterinareo an'i Epafrodita, izay toy ny zava-mani-pofona sy fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra, raisiny an-kafaliana. 19Fa Andriamanitro kosa no hamonona izay ilainareo rehetra, araka ny hareny, sady hampombainy voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa izany. 20Ho an'Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amena.
21Veloma any amin'ny olona masina rehetra, ao amin'ny Kristy Jesoa. 22Manao veloma anareo ny rahalahy izay ato amiko; manao veloma anareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ry zareo ao an-dapan'i Sezara. 23Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompo. >